अन्ततः ओली प्रचण्ड जुटे मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारीमा, क–कसको पद पर्यो खतरामा! – KhabarTime
अन्ततः ओली प्रचण्ड जुटे मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारीमा, क–कसको पद पर्यो खतरामा!
काठमाडौं । सरकारको एक वर्षको अवधि पुगी दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।केपी ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरु समयमा अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेपछि आलोचित बनेका छन्। सरकारका अधिकारीहरुले नै यो तितो सत्य कुरा स्वीकार गरिसकेका छन् ।
सरकारका अधिकारीहरुसँगै देशको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री स्वयंम आफैले यो वर्ष सिकाई मात्र भएको छ, काम खासै नभएको स्वीकारेका छन्। सरकार बलियो हुन नसक्नुमा पूर्व एमाले र माओवादी पक्षका केही मन्त्रीहरुलाई समेत जिम्मेवार बताइएको छ । जसकारण निकट भविष्यमै केही साताको अन्तरालमा मन्त्रीहरु हेरफेर हुने स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार लगानी सम्मेलन अगाडि नै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नेमानेकपा अ ध्यक्ष तथा प्रम ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच गहन छलफल भइरहेको छ। स्रोतले भन्यो, अब दुर्तगतिको विकासका र सम्मेलनका लागि सकरात्मक सन्देष दिन पनि मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुने तयारीमा रहेको छ। ।
स्रोतका अनुसार पर्यटनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारी, श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्ट, यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठ, अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा, कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल र खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनुवार फेरिने सम्भावना छ । नेकपाभित्रबाट सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउन दबाब बढेको स्रोतको दावी छ ।
अघिल्लो पटक लोकप्रिय बनेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित यसपटक विवादमा मात्र परिरहेका छन् । कुनै राम्रो काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण उनको पनि पद धरापमा छ । महिला मन्त्री थममाया थापाको मन्त्रालयको प्रगति निराशाजनक छ । उनी पनि हेरफेर हुने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । उनलाई हटाएर युवा महिला नेतृलाई सो मन्त्रालय लैजाने सम्भावना छ ।
साथै सरकारको रक्षाकवच बनेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई अझ महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिने सम्भावना समेत रहेको स्रोत बताउँछ ।
मन्त्री हेरफेरमा नेकपाका युवा नेता महेश बस्नेत मन्त्रिमण्डलमा अट्ने सम्भावना प्रबल रहेको स्रोत बताउँछ । सम्भवतः फागून महिनाभित्रै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी रहेको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्याल पनि मन्त्रिमण्डल हेरफेरको सम्भावना रहेको स्वीकार गरेको कुरा स्रोतले बताएको छ ।
देउवाले १५१ किलोको माला लगाएपछि विश्वप्रकाशले गरे यस्तो ट्विट!
प्रवासी श्रमिकले भन्दा विद्यार्थीले पठाए बढी रेमिट्यान्स